2 Mgbe a mụrụ Jizọs na Betlehem+ nke Judia n’oge Herọd+ bụ́ eze, lee! ndị na-agụ kpakpando,+ bụ́ ndị si n’ebe ọwụwa anyanwụ, bịara Jeruselem, 2 sị: “Olee ebe onye ahụ a mụrụ ịbụ eze+ ndị Juu nọ? N’ihi na anyị hụrụ kpakpando+ ya mgbe anyị nọ n’ebe ọwụwa anyanwụ, anyị bịara ịkpọrọ ya isiala.” 3 Mgbe Eze Herọd nụrụ ihe a, ahụ́ erughị ya ala, ya na ndị niile nọ na Jeruselem; 4 o wee kpọkọta ndị isi nchụàjà niile na ndị odeakwụkwọ niile nke ndị Juu, malite ịjụ ha ebe a ga-amụ Kraịst. 5 Ha sịrị ya: “Ọ bụ na Betlehem+ nke Judia; n’ihi na ọ bụ otú a ka onye amụma si dee ya, sị, 6 ‘Ma gị onwe gị, Betlehem+ nke dị n’ala Juda, ị bụghị ma ọlị obodo kasị nta n’etiti ndị na-achị Juda; n’ihi na n’ime gị ka onye na-achị achị ga-esi pụta,+ onye ga-azụ ndị m, bụ́ Izrel, dị ka atụrụ.’”+ 7 Herọd wee kpọọ ndị ahụ na-agụ kpakpando na nzuzo wee jụta ha nke ọma mgbe kpakpando ahụ pụtara; 8 mgbe ọ na-eziga ha Betlehem, ọ sịrị: “Gaanụ chọọ nwatakịrị ahụ nke ọma, mgbe unu chọtara ya, bịanụ kọọrọ m, ka mụ onwe m kwa wee gaa kpọọrọ ya isiala.”+ 9 Mgbe ha nụrụ ihe eze kwuru, ha gawara; ma, lee! kpakpando ahụ ha hụrụ mgbe ha nọ n’ebe ọwụwa anyanwụ+ nọ na-aga ha n’ihu, ruo mgbe ọ kwụsịrị n’elu ebe nwatakịrị ahụ nọ. 10 Mgbe ha hụrụ ka kpakpando ahụ kwụsịrị, ha ṅụrịrị ọṅụ nke ukwuu. 11 Mgbe ha banyere n’ụlọ, ha hụrụ nwatakịrị ahụ na nne ya bụ́ Meri, ha wee daa n’ala kpọọrọ ya isiala. Ha meghekwara igbe akụ̀ ha wee nye ya onyinye, ya bụ, ọlaedo na frankinsens na mea. 12 Otú ọ dị, ebe ọ bụ na Chineke dọrọ ha aka ná ntị+ ná nrọ ka ha ghara ịlaghachikwuru Herọd, ha si ụzọ ọzọ laghachi n’ala ha. 13 Mgbe ha lawara, lee! mmụọ ozi+ Jehova bịakwutere Josef ná nrọ, sị: “Bilie, kpọrọ nwatakịrị a na nne ya gbaga n’Ijipt, nọrọkwa n’ebe ahụ ruo mgbe m ga-enye gị iwu; n’ihi na Herọd ga-achọ nwatakịrị a ka o gbuo ya.” 14 O wee bilie kpọrọ nwatakịrị ahụ na nne ya n’abalị gawa Ijipt, 15 o wee nọrọ n’ebe ahụ ruo mgbe Herọd nwụrụ, ka e wee mezuo+ ihe Jehova si n’ọnụ onye amụma ya kwuo, sị: “N’Ijipt+ ka m si kpọpụta nwa m.” 16 Mgbe Herọd hụrụ na ndị ahụ na-agụ kpakpando aghọgbuwo ya, o were oké iwe. O wee zipụ ozi ma mee ka e gbuo ụmụaka niile bụ́ ndị nwoke na Betlehem na ógbè niile gbara ya gburugburu, malite ná ndị gbara afọ abụọ gbadaa, dị ka oge ahụ ọ jụtara nke ọma n’ọnụ ndị ahụ na-agụ kpakpando si dị.+ 17 E wee mezuo ihe e kwuru site n’ọnụ Jeremaya onye amụma, sị: 18 “A nụrụ olu ịkwa ákwá na mkpu arịrị dị ukwuu na Rema;+ ọ bụ Rechel+ na-akwara ụmụ ya ákwá, o kweghịkwa ka a kasie ya obi, n’ihi na ha anọkwaghị.” 19 Mgbe Herọd nwụrụ, lee! mmụọ ozi Jehova bịakwutere Josef ná nrọ+ n’Ijipt 20 wee sị ya: “Bilie, kpọrọ nwatakịrị a na nne ya lawa n’ala Izrel, n’ihi na ndị na-achọ mkpụrụ obi nwatakịrị a anwụwo.” 21 O wee bilie kpọrọ nwatakịrị ahụ na nne ya banye n’ala Izrel. 22 Ma mgbe ọ nụrụ na ọ bụ Akeleyọs bụ eze na-achị Judia n’ọnọdụ nna ya bụ́ Herọd, ọ tụrụ egwu ịgawa ebe ahụ. Ebe ọ bụ na Chineke dọrọ ya aka ná ntị ná nrọ,+ ọ banyere n’ókèala Galili.+ 23 O wee biri n’obodo a na-akpọ Nazaret,+ ka e wee mezuo ihe e kwuru site n’ọnụ ndị amụma, sị: “A ga-akpọ ya onye Nazaret.”+